Tinye injin nchọta foto ọhụrụ na Firefox | Akụkọ akụrụngwa
N'ihi ọnụnọ nke plugins ole na ole nke ndị ọzọ mepụtara, n'oge a Ohere ị haziri nchọta ihe nchọgharị Firefox anyị dị nnukwu. Dịka ọmụmaatụ, olee otu ị ga-achọ itinye foto gị na nyocha ọchụchọ nke ihe nchọgharị Internetntanetị a?
Nke a bụ ọrụ anyị ga-anwa ime ugbu a iji ihe nchọgharị Mozilla Firefox anyị. Nke mere na ị nwere ntakịrị nghọta doro anya banyere ihe anyị chọrọ ịme, na nke mbụ anyị na-atụ aro nyochaa akụkụ ụfọdụ nke ihe nchọgharị a bụ akụkụ site na andntanetị ma emechaa, anyị ga-atụ aro usoro ị ga - agbaso iji mezuo nhazi nke Search Bar na Mozilla Firefox.
1 Gịnị bụ oghere ebe Ogwe Ọchụchọ ahụ dị na Firefox?
2 Kedu ihe anyị ga-eme na Ogwe Ọchụchọ a na Firefox?
3 Kedu ka m ga - esi mepụta igwe nchọta ọhụụ?
Gịnị bụ oghere ebe Ogwe Ọchụchọ ahụ dị na Firefox?
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọbịa nke nọ na weebụ ogologo oge mgbe ahụ ị ga-ama otu esi amata nke ọ bụla n'ime akụkụ nke interface nke ihe nchọgharị Internetntanetị. E nwere ole na ole iche n'etiti ụfọdụ n'ime ha, ihe na- ị ga-enwe ike hụrụ tumadi n'etiti Google Chrome na Firefox. Nke mbụ n'ime ha abatala iji jikọta oghere nke ogwe ọchụchọ na nke URL, ebe na Mozilla Firefox a na-edebe ihe abụọ a iche iche, belụsọ ma ị ga n'ihu nkuzi nke anyị na-ejikọ ma gburugburu. Ihe anyị nwere mmasị na ịme ugbu a bụ n'akụkụ aka nri dị elu, oghere ebe anyị nwere ike ide isiokwu ọ bụla anyị kwesịrị nyocha n'ime engines ọchụchọ. Nke a bụ gburugburu ebe anyị ga-agbanwe ugbu a wee hazie foto anyị ma ọ bụ nke mmasị gị.
Kedu ihe anyị ga-eme na Ogwe Ọchụchọ a na Firefox?
Ebe ọ bụ na anyị amatala ebe na ohere ebe Ogwe Nchọgharị a dị n'ime ihe nchọgharị Mozilla Firefox, ugbu a kama anyị na-atụ aro ka ị mee obere ule a:
Gaba n'ime oghere nke Chọọ Ogwe na Firefox.
Pịa obere nọdụ ala Àkụ áká.
Ndị a 2 mfe ule na anyị na-atụ aro na ị ga-enwe ike hụrụ ọnụnọ nke ọchụchọ engines na-ahazi n'ime Search Bar, ebe anyi ga etinye igwe ozo, nke gha abu ihe kpatara na ebumnuche nke nhazi nke anyi choro n'oge a. Iji mezuo nke a, anyị ga-ejikarị mgbakwunye na-akwadoro na nchekwa Firefox, nke ị nwere ike ibudata na njikọ ndị a.
Ngwa mgbakwunye nwere aha Ogwe ọchụchọ ga-ejikọta ihe nchọgharị ozugbo, na-achọghị ka ịmalitegharị ya dịka ndị ọzọ yiri ya na-arịọkarị.
Kedu ka m ga - esi mepụta igwe nchọta ọhụụ?
Ọfọn, ọ bụrụ na anyị agbaso usoro ndị a tụrụ aro na paragraf ndị gara aga, mgbe ahụ anyị ga-adị njikere ịmalite ịrụ ọrụ maka ebumnuche anyị bụ isi. Ozugbo ị rụnyere ngwa mgbakwunye na anyị chọrọ tupu, ugbu a ị ga- Gaa na ebe nrụọrụ weebụ ebe enwere ozi gbasara gị, nke ga-abụ ihe mgbaru ọsọ iji mepụta igwe nchọta ahaziri ọhụrụ a; n'ihi na nke a anyị na-atụ aro iji ihe ọ bụla na ibe weebụ ọ bụ ezie na maka ntụrụndụ, anyị ga-eji saịtị nke mmanyaasesino.com:
Site na tinye-na arụnyere anyị na-aga vinagreasesino.com (ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nwere ike ịmasị gị)
Anyị na-achọ oghere ọchụchọ na ibe weebụ a.
Kama ịpị ihe, anyị pịa bọtịnụ nri aka nri.
A onodu ihe gha egosi.
Site na nhọrọ anyị na-ahọrọ nke na-ekwu «gbakwunye na nyocha mmanya".
Obere windo ga-apụta.
N'ebe ahụ, anyị na-ede mkpado na ọdịnaya nke ibe weebụ a (na ihe atụ anyị, ọ nwere ike ịbụ ngwanrọ, aghụghọ, nkuzi) na mpaghara ahụ yana, aha nyocha ọchụchọ a ga-enwe.
Enwere obere nhọrọ ọzọ nke na-ajụ anyị itinye foto ma ọ bụ onyonyo, na ịpị ya iji nwee ike gaa na ebe ebe achọtara foto a ma si otú a, họrọ ya ka ọ bụrụ akụkụ nke igwe nchọta ọhụụ a anyị ga-etinye na Ogwe ọchụchọ nke Firefox.
Mgbe emechara usoro niile a, anyị ga - achọpụta na en Search Bar nke Firefox foto anyị na-egosiIhe kachasị mkpa bụ ọrụ nke gburugburu ọhụrụ a anyị kere na-arụ. Ọ ga-eje ozi dị ka omenala nchọta igwe na vinagreasesino.com, nke pụtara na ọ bụrụ na anyị edee isiokwu banyere ngwanrọ, nsonaazụ ndị egosiri ga-abụ naanị ndị a na-anabata na ibe weebụ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Etu esi etinye foto anyị na ebe nchọta nke Firefox
[Mkpebi] Otu E3 dị mkpa karịa mgbe ọ bụla